Lôby, 6 taona : Hita faty, noloarana ny masony!
Zazalahy kely vao 6 taona monja, fiantso amin’ny anarana hoe Lôby, no hita faty omaly vao maraina tao amin’ny sekolim-panjakana iray ao Antaninarenina, Toliara.
Tamin’ny fotoana nahitana ny razana dia fantatra fa nisy namono ny tenany, tsy miakanjo intsony ary efa tsy nisy voamaso intsony koa. Tsy mbola fantatra anefa izay nahavanona izao famonoana sy fakana ny mason’ity zazalahikely ity izao.
Araka ny fitantaran’ny reniny dia hilalao baolina miaraka amin’ireo namany eo amin’ny tokontanin’ity sekolim-panjakana ao Antaninarenina ity no nialany tao an-tranony ny alahady lasa teo tokony ho tamin’ny 5 ora hariva. Raha efa nody avokoa anefa ireo naman’i Lôby tamin’ny 7ora hariva dia tsy mbola hita ihany ity zazalahikely ity. Rehefa tsy hita ihany i Lôby hatramin’ny 10ora alina dia lasa namonjy ilay sekoly voalaza fa nilalaovany baolina niaraka tamin’ireo namany ity reniny ity saingy tsy nahita azy akory. “Nilaza ilay mpiandry tanànan’ny sekoly tamin’izay alina izay fa efa lasa daholo ireo ankizikely mpilalao baolina ka tsy misy olona intsony ao, ary mihidy avokoa ireo efitrano fianarana rehetra.” Hoy ny reniny nitantara ny zava-nisy. Tao aorian’izay dia nihevitra aho hoy ity renim-pianakaviana ity fa mety lasa any amin’ny rainy, izay efa nisara-panambadiana taminy, ity zazalahikely ity, ka rahampitso vao mety hody. Na izany aza, mailo ity reny ity ary nametraka fampandrenesana teny anivon’ny mpitandro filaminana ihany.
Hita faty tsy misy voamaso
Omaly alatsinainy vao maraina kosa dia niparitaka ny vaovao tao Toliara fa nisy fatin-jazalahikely tsy misy voamaso intsony, hita tao amin’ny efitrano fianarana iray tao amin’ilay sekolim-panjakana voalaza fa nilalaovan’i Lôby. “Tonga dia fantatro fa ny zanako izany” hoy ihany ilay renim-pianakaviana, kivy tanteraka. Rehefa nozahana dia fantatra fa ny vatana mangatsiakan’ity zazalahikely tsy hita hatry ny alin’ny alahady teo tokoa ity hita ity ary efa tsy nisy voamaso intsony ny razana. Mihorohoro tanteraka ireo ray aman-dreny manan-janaka kely ao Toliara manoloana ny zava-nisy satria hala-taova avy hatrany no nandraisan’ny rehetra ny zava-nisy raha vao fantatra fa tsy hita ny mason’ity zazalahikely ity. Manao antso avo amin’ny tompon’andraikitra isan’ambaratongany ireo mponina manoloana izao zava-misy izao. Ny renin’ity zazalahikely ity kosa dia nilaza fa tsy miala amin’ilay mpiambin-tanànan’ny sekoly, izay niresaka taminy ny alina sy tsy namela azy hisava ny efitranon-tsekoly. Efa eo an-dalam-panatanterahina ny fanadihadiana lalina moa ny mpitandro filaminana ao an-toerana ary efa eo am-pelatanan’ny fianakaviana ny vatana mangatsiakan’i Lôby.